site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem]
1 site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 19th June 2010, 9:27 am
ဆို်ဒ်လေးတွေကိုကျော်ကြည့်ချင်လို့ ကျော်လို့ရတဲ့proxy လေးတွေမျှပေးပါလား
Last edited by Fox on 7th August 2011, 1:59 am; edited4times in total (Reason for editing : Tag)
2 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 19th June 2010, 9:38 am
3 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 22nd June 2010, 2:47 pm
Proxy = 212.116.220.164
4 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 28th June 2010, 10:23 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-11-02
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 43
ကွန်နက်ရှင် ကျနေရင်လည်း သုံးလို့ရတယ်။
5 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 29th June 2010, 1:20 pm
Ha Ha all friend. Please use silence
Saudi Proxy 212.116.220.164:443 (some site are banned)
USA Proxy 64.62.199.11:443 (All site are open even PORN site butalittle slow) Be patient to use it.
DON'T FORGET TO THANKS TO ME..... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 29th June 2010, 2:29 pm
porn site တောင် ပွင့် တယ် ....
ဂွတ် ဟ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒါဆိုဒီက ပိတ်ထားတဲ့ site တွေ အကုန်ပွင့် လောက်ပြီ
7 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 16th July 2010, 7:43 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] – no ads except the first page.
[You must be registered and logged in to see this link.] – no ads.
[You must be registered and logged in to see this link.] – no ads except front page.
[You must be registered and logged in to see this link.] – ads on the front page
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads.
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads, but clean looking
[You must be registered and logged in to see this link.] – clean looking but with popup ads.
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads on the first page, slow.
[You must be registered and logged in to see this link.] – no ads. but rugged site.
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads on the first page.
[You must be registered and logged in to see this link.] – slow, no ads.
[You must be registered and logged in to see this link.] – multiple proxys
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads but small ads
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads and popups.
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains huge ads.
[You must be registered and logged in to see this link.] (also available via [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] – withalittle ad but still ok.
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads, encodes url.
[You must be registered and logged in to see this link.] – no ads, french language.
[You must be registered and logged in to see this link.] – no input box by default
[You must be registered and logged in to see this link.] – lots of ads.
[You must be registered and logged in to see this link.] – same as above.
[You must be registered and logged in to see this link.] – popups, ads taking half of the browser space.
[You must be registered and logged in to see this link.] – popup, ads, no images.
[You must be registered and logged in to see this link.] – contains ads. (also available as .com .net .tk)
8 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 16th July 2010, 7:48 pm
lamin wrote: ဆို်ဒ်လေးတွေကိုကျော်ကြည့်ချင်လို့ ကျော်လို့ရတဲ့proxy လေးတွေမျှပေးပါလား
စာတွေ ကို ခေါင်းစဉ်တွေ ကို လိုုက်ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပီးမှ မေးစေချင်ပါတယ်
lamin ရေ ဖိုရမ်ဖောင်းပွသလို ဖြစ်သွားမှာ ဆိုးလို့ပါ
ကျတော် နဲ့ [You must be registered and logged in to see this link.] ပြောပြထားတာ ရှိပါတယ်
9 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 5th August 2010, 8:38 am
10 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 28th October 2010, 7:26 pm
တစ်ခုမှလည်း..ဖွင့်လို့မရဘူး...ကူညီကြပါ...proxy ကိုကျော်ချင်လို့... 203.81.163.66>80 လည်း..မကယ်နိုင်တော့ဘူး...........
11 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 18th January 2011, 11:51 am
ကဲ Proxy ကျော်လို့ရတဲ့ Firefox add-on လေးတစ်ခုပြော ပြမယ်နော ၊
နေသူရိန် စမ်းသုံးကြည့်တာ ရှယ်ကောင်းတယ်ဗျာ ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အရမ်းအသုံးဝင်တယ် ။
သူ့နာမည်က PhZilla လို့ခေါ်တယ် Firefox add-on တစ်ခုပါပဲ ။ Firefox add-on မှာ PhZilla လို့ ရှာပီး install လုပ်လိုက်ပါ ။ ကဲ သုံးကြည့်လိုက်ကျပါဦး
12 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 23rd January 2011, 10:39 pm
တည်နေရာ : YGN,Burma
down ultrasoft software at
13 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 19th February 2011, 1:00 am
thanks !! !! 92born ..
14 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 17th July 2011, 9:27 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-07-17
15 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 19th July 2011, 9:48 am
sky net အတွက်လည်းသိချင်တယ်ဗျာ...သူက no proxy ဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ပါ......ခုလောလော ဆယ်တော့ freedom လေးနဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်.......
16 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 19th July 2011, 11:24 am
Skynet အတွက် Proxy ကျော်သုံးဖို့ဆိုရင်
အဲ့ဒါဆိုရင် User name နဲ့ Password တောင်းပါလိမ့်မယ်
ကိုယ်က ဖြည့်လိုက်ရင် ဘာမဆို ကျော်ကြည့်လို့ရပါပြီ
လက်ရှိ ကျနေ်ာမှာ ၀ယ်ထားပြီးတော့ အလကားဖြစ်နေတယ်
No proxy လည်းမဟုတ်
Proxy ချိန်းတော့လည်း အင်တာနက် လိုင်းမတက်
နေပြည်တော် အတွက်ဆိုပြီး 203.81.67.18 port 8080 ထည့်သုံးမှပဲ အင်တာနက်သုံးလို့ရတယ်
ကျန်တာ ပြောင်းသုံးလို့ မရ
ကျနော်လည်း link တွေနဲ့ကျော်လိုက်။ By pass program တွေနဲ့ကျော်လိုက်နဲ့ပဲ အဆင်ပြေအောင်သွားနေရပါကြောင်း
17 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 23rd July 2011, 3:00 pm
ET wrote: laminphyulin ရေ
အစ်ကို ရေ proxy ကိုဘယ်လိုဝယ်ရတယ်ဆိုတာလေးလဲရှင်းပြဦးလေ....ကျွန်တော်က နယ်ကမို့ပါ...
18 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 23rd July 2011, 5:06 pm
လောလောဆယ် ကျနေ်ာ အစမ်းကျော်သုံးလို့အောင် ပေးလိုက်ပါမယ်
74.63.223.178 port 443
Password နဲ့ Username ကို ဘယ်လိပ်စာနဲ့ပေးပို့ရမယ်ဆိုတာ မေလ်းလိပ်စာပေးခဲ့ပါဦး
နောက်ပြီးတော့ ဂျီမေလ်းအကောင့်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေမပြေ မပြောသေးလို့
အောက်ကလင့် မှာ သွားကြည့်ပေးပါဦး
19 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 24th July 2011, 11:28 am
အဲဟုတ်ပ....ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းထားပြီးဝင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်.....တောင်းပန်ပါတယ်အစ်ကို....ဒါပေမယ့် gmail ကို sign in ၀င်တဲ့အခါမှာတော့.... verify လုပ်ခိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ.....ဓာတ်ပုံတင်ပေးချင်ပေမယ့်ကျွန်တော့်အခုသုံးနေတဲ့စက်က hang နေတာကြောင့်တင်မပေးဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ....
[You must be registered and logged in to see this link.] ပါပဲခင်ဗျာ....အခုလိုကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ......
20 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 24th July 2011, 12:31 pm
21 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 25th July 2011, 10:05 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-07-25
22 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 26th July 2011, 8:05 pm
ET wrote: မေလ်းထဲကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
pulone99 wrote: Site ကျော်တဲ့နည်းကိုsimpleလေးနဲ့ပြပေးပါလားဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
23 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 27th July 2011, 10:12 am
24 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 27th July 2011, 10:10 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-07-27
အော်အစ်ကိုကလဲ ဒါလေးများ E-mail လိပ်စာလေးဒါပို့လိုက်ပါ ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ E-mail ပို့မှဖြစ်မှာနော်။ ဒီမှာတင်လို့မဖြစ်ဘူး။
အလယ်က အက် က @ ကိုပြောတာနော် ဒီမှာက E-mail တင်လို့မရဘူးပြောနေလို့။
25 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 29th July 2011, 12:39 am
ကို ET ရေ အနော် လည်း စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ခင်ဗျာ
User name နဲ့ Password လေး ပေးလို ့ရရင်ပို ့ပေးပါလားခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်သုံးတဲ့လိုင်းမှာ ကိုET ပြောတဲ့proxy ထည့်လိုက်တာ User name နဲ့ Password
26 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 30th July 2011, 10:43 pm
ကျွန်တော့ဆီမှာတော့ Tor Browser ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျ။ သူက Ultra Surf, Freedom တို ့လိုမျိုးလေး။
သူ ့ကို run ပြီးလို ့ရပြီဆိုရင် သူ ့မှာပါပြီးသား Portable Firefox လေးတက်လာတယ်ဗျ။ အဲ့မှာကြိုက်တာသာ သုံးပေတော့ပဲ။ လိုချင်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မေးလ်လေးတွေပေးပါ..ကျွန်တော် Download Link လေးပြန်ပို ့ပေးပါ့မယ်။
27 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem] on 5th August 2011, 4:33 pm
sky net ပါပဲခင်ဗျာ.....user name နဲ့ password ထည့်ပေမယ့်လည်း ထပ်ကာတလဲလဲ ပြန်တောင်းနေတာပါခင်ဗျာ....
ထက်နိုင် wrote: ကျွန်တော့ဆီမှာတော့ Tor Browser ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျ။ သူက Ultra Surf, Freedom တို ့လိုမျိုးလေး။
အဲ့ဒါလေးရရင်လညး်မဆိုးဘူးဗျ...ဟဲ...freedom ကလညး် ကျော်လိုက်ရင် ကွန်နက်ရှင်က မလှုပ်တစ်လှုပ်ဖြစ်သွားရော.....ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်ဆီလည်းပို့ပေးစေချင်ပါတယ် htinlinnaung.tu@g...ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
28 Re: site ကျော်လို့တဲ့ Proxy လေးများရှိကြ ပါသလား [Problem]